दैलेखमा पहिरोले आठ घरमा क्षति
दैलेख (अस) । गत सोमवारदेखि आएको वर्षाले पहिरो जाँदा दैलेखका आठ घरमा क्षति भएको छ । जिल्लाको डुंगेश्वर–दुल्लु डाँडीमाडी सडक खण्डमा दलित समुदायका आठ घरमा क्षति पुगेको हो, जसमध्ये दुई घर पूर्णरूपमा भत्किएका छन् । पहिरोबाट मानवीय क्षति भने भएको छैन । पहिरोपीडित घरपरिवारलाई बुधवार दुल्लु नगरपालि...
विद्यालय भवनबाट प्रहरी कार्यालय सञ्चालन
सल्यान (अस) । सल्यानको एक इलाका प्रहरी कार्यालय विद्यालयको भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ । जिल्लाको दार्मा गाउँपालिकामा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय १ वर्षदेखि जनज्योति माध्यमिक विद्यालयको भवनमा सञ्चालन हुँदै आएको हो । विगतमा भाडामा बसेको प्रहरी कार्यालयको भवन जीर्ण बनेपछि विद्यालयमा सरेको थियो । इलाका...
साउन ६, खलंगा(जुम्ला) गाउँमा विद्यालय नभएका होइनन् तर, गोठीचौर–५, जुम्लाका विर्ष सार्कीको पहुँचमा थिएन । उनले अक्षर चिन्नसम्म पनि पाएनन् । नपढेको व्यक्तिलाई जागीर कसले दिने ? नोकरीको सम्भावना नै सकियो । ज्याला मजदूरी बाहेक अरु उपाय उनका सामु थिएन । एउटा मात्र विकल्प बचेको जिन्दगीलाई अगाड...
नलगाड जलविद्युतको मुआब्जा वितरण यसै वर्ष सकिने
साउन २, जाजरकोट । लामो समयदेखि अर्थाभावका कारण किस्ता–किस्तामा वितरण हुँदै आएको नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणस्थलको मुआब्जा स्थानीयवासीले यसै आर्थिक वर्षमा सबै रकम पाउने भएका छन् । सरकारले सबै मुआब्जा दिने गरी रू.२ अर्ब ७२ करोड रकम विनियोजन गरेपछि ६ हजार रोपनीको मुआब्जा यसै वर्षमा वितरण हुने वन त...
साउन १, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आव ०७५/७६ मा रू. नौ अर्ब ८० करोड ६५ लाख बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयगत रुपमा विनियोजित चालू गत रू. ६ अर्ब ३७ करोड ७७ लाख ७५ हजार र पूँजीगत रू. २१ अर्ब ९१ करोड, २६ लाख ४३ हजारमा कुल खर्च रू. नौ अर्ब ८० करोड ६५ लाख ९१ हजार (३५५) बजेट खर्च भएको आर्थिक मामिला...
प्रवीर ददेल , साउन १, रुकुम । रुकुम पश्चिममा सम्वन्ध विच्छेदको मुख्य कारण बैदेशीक रोजगार भएको पाइएको छ । जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमको तथ्यांक अनुसार गत चार वर्षमा जिल्ला अदालत रुकुममा ७२१ ओटा सम्वन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएबाट पुष्टि भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा वढी आर्थिक वर्ष २०७५/ ०७६ मा १९६ ओटा स...
बड्डीचौर–गुटु–घेनीघाट सडक : तीन दशकमा पनि भएन कालोपत्रे
सुर्खेत । पश्चिम सुर्खेतलाई जिल्लाको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर जोड्ने बड्डीचौर–गुटु–घेनीघाट सडकको ट्र्याक खुलेको तीन दशक बित्दा पनि कालोपत्र हुन सकेको छैन । सडकमा हिउँदमा धूलो र वर्षामा हिलोका कारण स्थानीय, यात्रु र सवारीचालकले वर्षौंदेखि सास्ती खेप्नु परिरहेको छ । सडकले पश्चिम सुर्खेतका कुनाथरी, तरंगा...
पाँच दिनदेखि कर्णालीमा हवाई सेवा प्रभावित
आकाश तारा बयक सुर्खेत । प्रतिकूल मौसमका कारण ५ दिनदेखि कर्णाली प्रदेशको हवाई सेवा प्रभावित भएको छ । केही दिनदेखि लगातार वर्षा र हुस्सु लाग्नाले कर्णालीमा हवाई सेवा ठप्प भएको हो । कर्णालीका पहाडी जिल्लामा नियमित हवाई उडान नहुँदा यात्रु आवतजावत र खाद्यान्न तथा औषधिजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानीमा समस...
३ दिनदेखि कर्णालीमा हवाई सेवा प्रभावित, अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्तिमा समस्या
आकाश तारा बयक असार २९, सुर्खेत । पछिल्लो तीन दिनदेखि कर्णालीमा हवाई सेवा प्रभावित भएको छ । कर्णालीका पहाडी जिल्लाहरुमा नियमित हवाई उडान नहुँदा यात्रुसँगै अति आवश्यकीय खाद्यन्न तथा औषधीजन्य वस्तुहरुको आपूर्तिमा समस्या आएको छ । केही दिनदेखिको लगातार वर्षा, हुस्सु र खराब मौसमका कारण कर्णालीमा क्षेत्रमा...